Inkulumo eyenziwe nguPatrice Lumumba ngesikhathi somkhosi wokuzimela ngoJuni 30, 1960 - Afrikhepri Fondation
ULwesibili, Agasti 4, 2020
Inkulumo eyenziwe nguPatrice Lumumba emkhosini wenkululeko ngoJuni 30, 1960
COngolaise et Congolais, Ama-Independent Fighters Namuhla Onqobayo, ngiyanibingelela egameni likahulumeni waseCongo. Nani nonke, bangane bami, abaye balwa ngokungakhathali eceleni kwethu, ngiyacela ukuba nenze lo June 30, 1960 usuku olukhazimulayo enizolugcina. Nani nonke, bangane bami abaye balwa ngokungakhathali eceleni kwethu, ngiyacela ukuba nenze lolu suku lwangoJuni 30, 1960 usuku olukhazimulayo eniyolugcina ezinhlizweni zenu naphakade, usuku enizozifundisa ngalo ngokuziqhenya izingane zalo, ukuze nabo bahlanganyele namadodana abo nabazukulu babo indaba ekhazimulayo yomzabalazo wenkululeko. Ngoba le nkululeko yeCongo, uma imenyezelwe namuhla esivumelwaneni neBelgium, izwe elinobungane esiliphatha njengelinganayo, alikho elinye izwe laseCongo elingahlonishwa igama elingasoze lakhohlwa ukuthi Umzabalazo wokuthi usunqobile, umzabalazo wosuku nosuku, umzabalazo onamandla futhi onengqondo, umzabalazo lapho singazange sigcine khona amandla ethu, noma indawo yokuhlala, noma ukuhlupheka kwethu, noma igazi lethu.
Kuwumshikashika okwakukhona izinyembezi, umlilo futhi igazi, siyaziqhenya ekujuleni thina, ngoba kwakunzima esihle nje, umzabalazo kubalulekile ukuqeda ubugqila ezilulazayo owaphoqelelwa phezu kwethu ngamandla. Sasiyini isiphetho sethu eminyakeni engu-80 yokubusa kwamakholoni, amanxeba ethu ahlanzekile futhi abuhlungu kakhulu ukuba sikwazi ukuwaxosha ememori yethu. Siye yaziwa kuhlukumeza umsebenzi edingekayo ukuze enane amaholo elalingelona angasivumeli udle yethu, noma sigqoka noma ngendlu thina ngokufaneleyo, noma ukukhulisa izingane zethu njengoba izidalwa abathandekayo. Sasizi ukuthi kwakungabonakali, ukuhlambalaza, ukushaywa okwakudingeka siphume ekuseni, emini nasebusuku, ngoba sasingu-niggers.
Ubani ozokhohlwa ukuthi umuntu omnyama uthe "wena", hhayi njengomngane, kodwa ngoba "Wena" ohloniphekile ugcinelwe abamhlophe kuphela! Siyazi ukuthi amazwe ethu asebiwe egameni lokuthi imibhalo esemthethweni, eyaziwa kuphela ilungelo lezinamandla kakhulu. Sasiyazi ukuthi umthetho wawungakaze ufanane, kuye ngokuthi ngabe umhlophe noma omnyama, uhlala kwabanye, unonya nabangenangqondo kwabanye. Siyazi ukuthi ukuhlupheka okubuhlungu okwenziwe yimibono yezombusazwe noma, izinkolelo zenkolo: abadingisiwe ezweni lakubo, isiphetho sabo sasiphambene nokufa ngokwayo. Siyazi ukuthi emadolobheni kwakukhona izindlu ezinhle kakhulu zabamhlophe kanye nezikhukhula ezikhungethwe abamnyama; ukuthi umuntu omnyama akavumelekile kumabhayisikobho, ezindaweni zokudla, noma ezitolo ezithi "i-European"; ukuthi umuntu omnyama wayehamba esigodini se-barges ngasezinyaweni ezimhlophe endaweni yakhe yokunethezeka. Ubani ozokhohlwa ekugcineni ukudubula lapho abafowethu abaningi kangaka bafa khona, noma iziboshwa lapho kwaphonswa khona ngonya labo ababengasayifuni ukuzithoba ngaphansi kohulumeni wobulungiswa bokucindezelwa nokuxhashazwa!
Abafowethu, bafowethu nodadewabo, sizoqala umzabalazo omusha, umzabalazo onamandla ozoholela ezweni lethu ekuthuleni, ekuchumeni nasebuhleni. Sizokwakha ubulungiswa bezenhlalakahle ndawonye futhi siqinisekise ukuthi wonke umuntu uthole isinxephezelo esifanele somsebenzi wakhe. Sizobonisa izwe ukuthi umuntu omnyama angenzani uma esebenza ngenkululeko, futhi sizokwenza iCongo ibe yimbangela yethonya kuyo yonke i-Afrika. Sizoqinisekisa ukuthi amazwe ezweni lakithi azuzisa ngempela izingane zakhe. Sizobukeza yonke imithetho yasendulo futhi senze amasha azoba abalungile futhi ahloniphekile. Futhi konke lokhu, Bakwethu abathandekayo, qiniseka ukuthi singakwazi ukubala hhayi kuphela amabutho ethu amakhulu ingcebo yethu makhulu kodwa usizo lamazwe abaningi bezinye izizwe samukela ukusebenzisana ngaso sonke isikhathi uma fair nokuthi ngeke afune ukuphoqa noma iyiphi inqubomgomo kithi.
Ngakho-ke, iCongo entsha ezokwakhiwa uhulumeni wami izoba yizwe elicebile, elikhululekile nelichumile. Ngiyanicela nonke nikhohlwe izingxabano zezizwe ezisikhipha amandla futhi zisibeka engcupheni yokusidelela phesheya. Ngiyanicela nonke ukuthi ningehli kunoma yikuphi ukuzidela ukuze niqinisekise impumelelo yebhizinisi lethu elihle. Ukuzimela kweCongo kuveza isinyathelo esinqumayo ekukhululeni izwekazi lonke lase-Afrika. Uhulumeni wethu kazwelonke oqinile uzoba ukusindiswa kwaleli lizwe. Simema zonke izakhamizi zaseCongo, abesilisa, abesifazane nezingane ukuba basebenze ngokuqinile, ngenhloso yokwakha umnotho wezwe ozochuma ozonikezela inkululeko yethu kwezomnotho. Tribute kulabo abalwa nenkululeko yezwe! Inkululeko ende phila nobunye base-Afrika! Phila isikhathi eside i-Congo ezimele futhi ezimele!
UKUFA OKUQHUBEKE IZINHLIZIYO ZE-AFRIKA: Ukubulawa kwabantu ngobuqili kukaPatrice Lumumba waseCongo kanye nokuDilizwa kwalowo owake waba yiBelgian Colony
5,92€ kukhona kusitoki
3 okusha kusuka ku-5,92 €
Thenga i-5,92 €
kusukela ngo-Agasti 4, 2020 11:04
Usuku lokukhulula 2018-02-04T00:00:01Z
Inombolo yamakhasi isihlangane 41
Usuku lokushicilela 2018-02-04T00:00:01Z
Ucingo lukaThomas Sankara lokuzinqumela
I-2025, i-revolution emazweni ka-Kama